Inkonzo ye-OEM / i-ODM -Huizhou Vivibetter Packaging Co., Ltd.
Ingqekembe yeMali ye-PP
I-OEM kunye neeodolo zorhwebo lwangaphandle
I-HuiZhou VIVIBetter yokupakisha Co, Ltd yeyokuqala ukubandakanyeka kuyilo, uphuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kweshishini leplastikhi kunye nokuthungwa, ukusuka kwisizukulwana sokuqala semveliso ukuya kwisizukulwana esitsha seemveliso zeplastiki, iVivibetter ngemizamo yophuhliso lwezinto ezintsha, Ekugqibeleni kwimveliso yeeplastiki engenawo amanzi iseke i-R & D eyomeleleyo kunye nesiseko semveliso kweli lizwe. Iseke uthungelwano lokuthengisa olufanelekileyo kunye nearhente yokuhambisa. Wamkelekile ukuba ujoyine iimveliso zethu, nxibelelana neHuiZhou ViviBetter yokupakisha Co., Ltd., wajoyina ulwazi lokuqonda ngakumbi imeko!
Inkonzo ye-OEM, ye-ODM
"Umdibaniso ogqibeleleyo wokuzimela, ubhetyebhetye, umvuzo, ixabiso" lwenkonzo eyaziwayo ye-OEM, izisombululo ze-OEM ziya kuba lukhetho lobulumko kwinkampani yakho. Nokuba usekhaya okanye uphesheya, ngokweminqweno yakho, ngaphandle kotyalo-mali olukhulu, ukugcinwa kwayo yonke imiba yabacebisi. Ukuveliswa kwemveliso ekumgangatho ophezulu yokungena manzi ngokuhambelana nemigangatho yamanye amazwe kuwe; Ixabiso elifanelekileyo, ukuphendula ngokukhawuleza, ukunxibelelana ngokuthe ngqo ngesantya sethu sengqondo kunye neenkonzo zobungcali.
Sisoloko sithatha ukoneliseka kwabathengi njengenjongo yokuqala. Hlonipha iimfuno ezahlukeneyo zabathengi abahlukeneyo, abathengi ukufikelela kwisisombululo nge-OEM eyahlukeneyo.
Ukuzimisela inkqubo yoomatshini
I-1, Iimfuno zokulungiswa kwegama lomthengi, tsalela umnxeba / undwendwele iwebhusayithi yethu okanye ucele incwadana ye-OEM ukuqonda iinkcukacha zentsebenziswano
2, abathengi bethu bayamenywa ukuba batyelele umzi-mveliso
I-3, intengiso yethu kunye nonxibelelwano lobuchwephesha kunye nabathengi
I-4, iimveliso zethu zokucutshungulwa kwesampulu ngokweemfuno zabathengi
5, amava oMthengi, iskim semveliso, ingxelo yokuphucula kude kube omabini amaqela afikelele kwisivumelwano
I-6, umthengi ukhetha iskimu se-OEM kunye nokuqhutywa kwezivumelwano ezisayinwe nenkampani yam
I-7, Umthengi uyafunwa sisivumelwano kwangaphambili I-50% yecandelo lokuqhubekeka
8, abaThengi kunye nokungena kwethu ekusebenzeni
9, Sakha iifayile zabathengi
I-HuiZhou VIVIBetter yokupakisha Co, Ltd inkampani ibonelela ngoluhlu olupheleleyo lwemveliso ye-OEM, njengoko umrhwebi weplastiki ongangeni manzi ukubonelela ngeenkonzo zokuma ze-OEM, kunye nokubonelela ngoluhlu olupheleleyo lweemveliso ezisemgangathweni zenkonzo yokuqhubekeka kwe-OEM kubathengi abaninzi baphesheya kwezilwandle kwiiarhente ezininzi zommandla wasekhaya ! Ukujonga okuhle malunga nemakethi yemveliso engenamanzi, ufuna ukuseka uhlobo lwabo lwe-OEM? I-HuiZhou VIVIBetter yokupakisha yeCandelo ayinakuhamba gwenxa, umgangatho olungileyo, ixabiso elihle, inkonzo elungileyo, amandla okuzimelela okuzimeleyo
Ezona mveliso ziphambili kwiVIVIBetter zibandakanya zonke iintlobo zePET kunye nokupakisha kwendwangu, ibhegi engenawo amanzi, ubhaka ongangeni manzi, izihlangu ezingangeni manzi kunye neiglavu zomqhaphu, iimopu, iitawuli kunye neempahla ezilukiweyo zebhegi yokuthenga njalo njalo. Imotto yethu ithi "uMthengi uthixo wethu kunye nomgangatho wethu ubekwa kwindawo yokuqala. Sicinga ngabathengi nangaliphi na ixesha. Sombulula ingxaki kwindawo yokuqala"
I-Huizhou Vivibetter Packaging Co., Ltd.
Ifowuni: + 86-13352793058